Iwo Akanakisa Simba Wiricheya Yekufamba Kwemhepo | Karman® Mawiricheya
Simba rakanakisa wiricheya kana sikuta yekushandisa parwendo nendege zvinonetsa kutora nekuti zvinoenderana ne mamiriro inosarudza ivo mhando of mavhiripu kana scooter munhu anofanira kutora parwendo rwavo. Kune akawanda akasiyana mhando of mavhiripu kunze uko kune zvakasiyana zvinangwa zvinobatsira kufambisa hupenyu hwezuva nezuva hwemunhu. Isu tinoita zvisinei tinokurudzira zvinhu zvakati wandei zvekutarisa pakuronga nendege uye kuona kuti chii icho wiricheya yakanakisa yemunhu wese.
Nyaradzo ndeye zvinonyanya kukosha kana zvasvika pane parwendo nekuti zvinogona kutora maawa munhu asati asvika kwavari kuenda. Iva nechokwadi chekuti wiricheya kushandiswa kunopa kunyaradza kwakawanda seku zvinogoneka kunyanya kana parwendo oga. Nhandare dzinowanzo kupa rubatsiro, asi zvinokurudzirwa zvikuru kuronga rubatsiro nguva isati yasvika. Kunyangwe kufamba ndega or kushandisa vamiririri venhandare yendege kunyaradza kwako kunoramba kuri pamberi.
Saizi chimwe chinhu chekufunga nezvacho nekuti mabhiriji ekubhodha akatetepa uye anogona kudiwa kushandisa wiricheya yendege kukwira ndege. Kazhinji mawiricheya mahombe kunamira kana kungoita kwete kukwana mukati mebhodhi rebhodhi uye ku kudzivirira nyaya kubva pakuitika iyo ndege ichapa wiricheya yemanyorero kubatsira board. Izvi hazvingovimbise boarding inokurumidza asi inodzivirira kukuvara kune yako pachako kushandiswa mavhiripu. Kana iyo mutakurwi zvinoda kushandisa yakatarwa wiricheya, kuti ukwire ndege, inofanirwa kuve yakamanikana se zvinogoneka kuve nechokwadi chekuti inokodzera kuburikidza neiyo boarding tunnel.
Mobility inogona kutamba chinzvimbo chikuru kana zvasvika kune kushandisa a wiricheya yemagetsi kana sikuta kufamba nendege. Vazhinji vane saizi yakakwana mavhiripu izvo zvinopa kunyaradzwa kwakanyanya, zvisinei, kushaya iyo kugona kufamba mushe pakati penzvimbo dzakakamira uye kana kumativi emakona. Izvi zvichabatsira kupa an nyore boarding ruzivo uye kudzivirira kukuvara kumidziyo.
Nesarudzo dzakawanda kunze uko uchisarudza rakanakisa simba wiricheya kana sikuta yekufamba nendege inogona kunge yakaoma asi imwe yeiyo kutungamira zvigadzirwa muindasitiri "Karman Healthcare" yakaratidza kuti inopa zvakawanda zvekuita sarudzo kusarudza kubva. Ivo vane hunyanzvi mukupa kune avo vatengi 'zvido zvekuona kugutsikana uye kugadzira ezuva nezuva basa zvisina basa. Mimwe yavo yemhando yepamusoro inokwikwidza nayo mazita anozivikanwa zvakaratidza kuve chinodiwa kune vatengi nekuda kwekunyaradzwa kwavo, saizi uye inoshamisa kugona kufambisa nyore. Nehurombo, hapana chaiyo yakanakisa simba wiricheya kana scooter yeiyo general wiricheya vashandisi nekuti izvo zvinodiwa zvinosiyana pamunhu nemunhu, asi Karman ine sarudzo dzakawanda dzinogona kuve sarudzo yakanakira iwe.